प्रधानमन्त्रीको भियतनाम–कम्बोडिया भ्रमण औचित्यहीन ! « Nagarik Khabar
प्रधानमन्त्रीको भियतनाम–कम्बोडिया भ्रमण औचित्यहीन !
प्रकाशित मिति :7May, 2019 1:45 am
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबारदेखि दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमण गर्दैछन्। भियतनामका प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई लिएर कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञले भने प्रश्न उठाएका छन्। नेपालसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका दुई मुलुकको भ्रमणबाट नेपाललाई खासै फाइदा नभए पनि प्रधानमन्त्रीले उच्च महत्व दिएको भन्दै विज्ञहरूले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
‘राज्यकोषको ढुकुटी खर्च गरेर विदेश भ्रमण गर्दा मुलुकको कूटनीतिक महत्व र प्राथमिकताका विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकार जयराम आचार्यले भने। जनताको करबाट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण महत्वपूर्ण रहेकाले त्यस्ता भ्रमणप्रति कसैले प्रश्न नउठाएको बताए।
तर प्रधानमन्त्री ओलीको भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमण भने महत्वपूर्ण नभएको उनको भनाइ छ। लामो समयदेखि एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म तानाशाही व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको मुलुकमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको उनको तर्क छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकासित भएको छ ।